Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland oo si adag uga hadlay hadal xiisad dhaliyay oo uu yiri wasiirka waxbarashada federaalku – Kalfadhi
Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland Avv. Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan ayaa si adag uga hadlay khilaaf ka dhashay qaadista imtixaanka shahaadiga ee dalka oo ay isaga hor yimaadeen Puntland iyo dowladda federaalku.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qaadi doonto guud ahaan imtixaanka shahaadiga ah ee dalka oo dhan, balse arrintaas waxaa mar horeba iska diiday Puntland oo sheegtay in ay leedahay manaahij waxbarasho oo midaysan iyo imtixaan shahaadi ah oo ku dhowaad 10 sano si mid ah ay u qaadaysay goboladeeda.
Mudane Cabdullahi Goodax Bare wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ayaa dhowaan warbaahinta Qaranka ka sheegay in ay arrintaas nasiib-darro tahay, wuxuuna sheegay in ay ardayda iyo waalidiinta uga digayaan dhibaatada hadhow uga iman karta go’aanka Puntland ay ku diiday imtixaanka ay wasaaradda waxbarashada ee federaalku qaadayso.
Hadalkaas ayaa xasaasiyad badan ka abuuray Puntland waxaana ka hadlay mudanayaal baarlaman iyo siyaasiyiin kale. Dadweynaha ayaana baraha bulshada si weyn ugu dhaleecay hadalka wasiirka. Xildhibaan Avv. Cabdicasiis Cabdullahi oo ah gudoomiye ku xigeenka baarlamanka Puntland si adag u yiri;
“Wasiir Goodax, Puntland 21sano ayey jirtay manhaj waxbarasho oo si heer sare ah loo diyaariyey oo tayo leh la aqoonsan yahay ayey leedahay, ardaydeeda iyo mustaqbalka carruurteena anagaa ka fekerayna hanjabaada iyo isku dayga aad rabto inaad ardayda iyo waalidiinta hanka kaga jebiso yaanu adiga wax u yeelin Puntland”
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha mudane Avv. Ismaaciil Maxamed Warsame qudhiisa ayaa arrintan ka hadlay.
Mudanayaasha kale ee golaha wakiillada ee arrintan ka hadlay ayaa ugu baaqay wasiirka waxbarashada dalka inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaas isla markaasna ka noqdo. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa horraantii March mar uu kormeeryay wasaaradda waxbarashada wuxuu soo hadal qaaday arrintan, wuxuu sheegay in uusan socon doonin go’aanka wasaaradda waxbarashada federaalku ay ka soo saartay imtixaanaadka guud, isagoo sheegay in dalku federaal yahay, hawshaasna ay iyagu leeyihiin.
Sharci-yaqaan Saalim Siciid Saalim oo arrintan ka hadlay ayaa cuskaday dastuurka KMG ah ee dalka qodobkiisa 52aad, kaas oo sheegaya in awoodda adeegga waxbarashadu ay tahay mid wadaag ah. Saalim ayaa ku taliyay;
“dastuurku waxa uu caddaynayaa in waxbaarshada loo maamulo hannaan wadaag ah oo aan qolona kaligeed duurka la gelin ama isku koobin siyaasd ahaan , maamul ahaan iyo maalgelin ahaan ba ee wada xaajood iyo iskaashi ka sameeyaan madaxda labada heer; federaalka iyo maamul goboleedyada”
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa bishii hore iclaamisay wakhtiga ay qaadi doonto imtixaanka shahaadiga ah ee fasaladda siddeedka dugsiga dhexe iyo afraadka dugsiga sare, waana 18ka bisha maajo, 2019.
Golaha Shacabka oo uu maanta ka baaqanayo kulankii 5-aad